Umgangatho ophezulu woBume beH Ulwakhiwo lwensimbi olwenziwe ngokuQinisekileyo - China Qingdao Xinmao ZT Steel
Ubunjani obuphezulu be-H yobume beNdawo yokuSebenza yoLwakhiwo
Isefu yesakhiwo sentsimbi esenziwe kwangaphambili senziwe eTshayina
Structures Steel Faka:
Ubunzima 1.light, amandla aphezulu, ubude enkulu;
Ithuba lokwakha 2.short, ixabiso eliphantsi;
3.easy ukuhamba, recycle, nokusingqongileyo;
4. isetyenziswa ngokubanzi, esetyenziswa njenge-mveliso / isityalo / workshop, yokugcina, isakhiwo ofisi, moya yokuma etc;
Iyahlala 5.structural, ukulungiswa lula.
Q235B, Q345B: imilo H, Box, umbhobho Steel, Hot ezityikitywe sheet
Q235B, Q345B: imilo H, Steel Truss, Hot ezityikitywe sheet
Q235B, Q345B: intonga Steel, umbhobho Steel, Angle intsimbi
C okanye imilo Z, purlin Steel
Q235B, Q346B: C okanye imilo Z, purlin Steel
sheet steel corrugate Single ezimibalabala, panel Sandwich kunye EPS, Rock uboya, DB, Glass uboya njl,
Ordinary, amandla High
Isefu plate Steel, Stainless intsimbi
Aluminium ingxubevange-Glass, aluminium ingxubevange-shutter, PVC
Sliding okanye wenze izimbo umnyango
PVC nelembande, ipipi Umbala intsimbi
Ezenziwe umbala sheet steel ubukhulu 0.5mm
Crane neetoni-5 ukuya kwiitoni 20
Inkqubo yoLwakhiwo kunye neNkqubo yoLwakhiwo:
1. Lungisa izinto ekrwada: ipleyiti Imi intsimbi okanye ukusetyenziswa internation ubungakanani H icandelo zentsimbi kunye angle ziintsimbi, tube ngeenxa zonke, intsimbi ngeenxa zonke, isikwere ityhubhu njl
2. zeNdibano ukuwelda: abatyhidi wethu liya kulandela imizobo ukuba bahlanganisane amalungu zentsimbi waza weld kubo ngokudibeneyo njengomqadi wonke / ikholamu / brace njalo njalo
(Umhloli wethu osemgangathweni uya kujonga iziqwenga zentsimbi emva kokugqitywa kwe-welding, olu luhlobo lokuqala lokujonga umgangatho)
3. Ukugqabhuka kwesanti: Emva kokuwelda kunye nokupolisha, ifuthe lethu lesanti linokufikelela kwi-2.5 grade ephezulu, ilunge kakhulu ukumelana nerusi; (Ukujonga umgangatho okwinqanaba lesibini)
4. Ipeyinti: Kwisithuba seeyure ezi-2 emva kokudubula kwentlabathi, onke amalungu entsimbi kufuneka abeyipeyinti. Umthengi unokukhetha nawuphi na umbala kunye naluphi na uphawu lwepeyinti. (Ukutshekishwa komgangatho wesithathu)
6 .Packing kunye ukulayisha: Ukuba iinkonzo zifuna ukuba ukulayisha iimpahla kwemigqomo sisondele, siya ukupakisha lowo amalungu isakhiwo sentsimbi ngu omnye ngentsimbi skid nizibophe kakuhle iphakheji ngentsimbi yonke.
( Ukutshekishwa komgangatho wesine) Isakhelo sesinyithi esingaphandle kokupakisha umthwalo kwi-40 'OT, uphahla kunye nomthwalo wepaneli yodonga kwi-40' HQ. Okanye ngokwemfuneko yabathengi.
Ezothutho kunye noFakelo
Sibonelela abathengi ngesisombululo esinye sezindlu ezihlanganisiweyo kubandakanya ukufakwa kunye nokusebenza.Angonjiniyela kunye nabasebenzi banokuthunyelwa phesheya ukuze bakhokelwe kwaye bafakelwe.
Kutheni Khetha Qingdao Xinmao ZT Steel Construction Co., Ltd.
1.Imbali ende kunye namava atyebileyo kubume bentsimbi:
A. iminyaka 15 + Experience Industry
B. + iiprojekthi 600 amava apha ekhaya nakumazwe aphesheya.
C. oluzinzileyo ubudlelwane borhwebo kunye namazwe 20 +:Pakistan, Sudan, Mozambique, Uzbekistan, Nigeria, Tobago, Abu Dhabi, Yemen, Jamaica, Ecuador, Qatar, Australia, India, Israel, Malaysia, Mauritius, Turkmenistan, ect.
2. Isixhobo Advanced and Line Imveliso Professional:
A. 50,000 square metres mveliso indawo
B. 600 + abasebenzi baqeqeshwe kakuhle.
C. 100 + yobuchule iinjineli kunye kuyilo kunye nokukwazi ukwakha,
D. 10 steel isakhiwo kwizikhundla zemveliso .
E. 80 iiseti esikhulu nkqubo ngqo yaye kweli eliphezulu Equipments.
A. 50000 Iitoni Ulwakhiwo Steel Capacity yoNyaka: engundoqo isakhiwo sentsimbi 20000mts, 15000mts intsimbi zasesekondari, iphepha intsimbi ezahlukeneyo iiprofayili 300000 sqm yonyaka
B. $ 40000000 Ingeniso yonyaka
Bongeka C. High Construction, ixesha lonikezelo kwiintsuku ezingama-20 ukuya 30
A. ISO Certificate umgangatho, zokusingqongileyo, ezempilo kunye nokhuseleko
Structure B.Steel Construction Qualification Certificate Ibanga II.
I-30% yokuhlawula ezantsi kunye nebhalansi ehlawulwe ngu-T / T OKANYE L / C ngaphambi kokuthunyelwa okanye ukuxoxisana.
2. Ixesha Delivery?
Iintsuku ezingama-20-35 emva kokuhanjiswa
3. Ngaba zinika inkonzo ukuyila?
Ewe, sibe iinjineli uyilo ngaphezulu kwe-100. Siya onokukwazi ukwenza imizobo isisombululo olupheleleyo ngokwe requirments zakho.
4. Ingaba ezinezinto ekukhokeleni ufakelo site phesheya?
Ewe, singakwazi ukubonelela inkonzo yofakelo, esweni kunye noqeqesho. Thina phesheya ekukhokeleni Iqela ufakelo nabantu 60.
Imfonomfono: + 86-15621140557 (WeChat / WhatsApp)
A: Room 201, Building 32, Tian An isixeko intanethi, kwisithili Chengyang, Qingdao, China
Previous: Isefu Ulwakhiwo prefabs Industrial Warehouse Steel yoMvelisi
Next: isakhiwo yokugcina lwentsimbi olwalusele kunye Ufakelo Fast kunye Indleko esizayo
Ulwakhiwo olwalusele Warehouse Steel
Igumbi lokugcina izixhobo zentsimbi
Ulwakhiwo lokuKhanya kwesakhiwo seNsimbi
Olwalusele EZIIMODYULI Container House for Famil ...
Ulwakhiwo oluphezulu lweNdlu yoLwakhiwo lweWarehous ...
Prefab Flat Pack isikhongozeli indlu for Constructu ...